Jan 11, 2020 1 min
အရင်လတွေက အလကားရတဲ့ code တွေ service တွေ အကုန်လျှောက်စမ်းရင်း Audiobook အနေနဲ့ Amazon Audible က free ရတာ တွေ့လို့ စမ်းကြည့်မိတော့ စာအုပ်နှစ်အုပ်စာ အတွက် credit2ခုရခဲ့တယ်။ အဲဒီမတိုင်ခင်က လုပ်ထားဖူးတဲ့ Audible အကောင့်ရှိလို့ ထပ်မရတော့ဘူး ထင်ပေမယ့် တကယ့်တကယ် register လုပ်ကြည့်တော့ Amazon UK နဲ့ Amazon US နဲ့က မတူညီတဲ့ စနစ်အနေနဲ့ run တာဖြစ်တဲ့ အပြင်ရတဲ့ ပေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေကလည်းမတူဘူး။ ရတုံးရခိုက်လေး ဘာစာအုပ်ဖတ်ရမလဲ စဉ်းစားနေတုံး Twitter မှာလည်း အက်ဒ်ဝပ် စနိုးဒန် ရဲ့ စာအုပ်ကလည်း ထွက်ခါစဆိုတော့ ဖတ်ကြည့်မယ်လုပ်ရင်း Claim လိုက်မိတာနဲ့ ဖတ်ဖြစ်သွားတာပါ။ အစောပိုင်း အသံစာအုပ် ဖတ်မယ်ဆိုပြီး နားထောင်နေပေမယ့် အိပ်ရာမှာ အိပ်အိပ်ပျော်သွားတာ ကြာတော့ ဖတ်ရမယ့် အခန်းတွေက ရှေ့ကိုမတက်တော့ဘူး ဖြစ်နေရင်းနဲ့ မဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီး စာအုပ် ကို ရှာဒေါင်းပြီး အစကနေ ပြန်ဖတ်ရပါတယ်။
The NY Times review of "Permanent Record" by Edward Snowden. It's new to our collection. https://t.co/uLhdRezXUY
— Lyme Public Library (@LymePL) October 19, 2019
စာအုပ်ပုံစံကတော့ Memoir ပုံစံ ၊ အစောပိုင်း စနိုးဒန် ငယ်ရာကနေ ကြီးတဲ့အထိ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ သူ စစ်မှုထမ်းခဲ့တဲ့ကာလတွေ ၊ CIA နဲ့ NSA မှာ အလုပ်ဝင်ခဲ့ပုံနဲ့ နောက်ပိုင်း သူပြေးတဲ့အထိကို ရေးသွားတာပါ။ ဖတ်ဖတ်ချင်း သတိထားမိမှာက စနိုးဒန်က အတော် စာရေးကောင်းတာပဲ။ နည်းပညာဘက်ကလူမို့လို့ အချက်အလက် အခြေခံပြီး ခပ်ထောင့်ထောင်လို့ရေးမယ်ထင်ပေမယ့် တကယ့် တကယ် စတွေ့ရမှာက သူကြီးပြင်းတဲ့ မြို့ ၊ ဘိုးစဉ်ဘောင်စက် ရာဇဝင်တွေနဲ့ သူ့ ကွန်ပျုတာကို စထိတွေ့တဲ့ အကြောင်းကိုဖတ်ရတာ အတော်လေး နှစ်ခြိုက်ဖို့ကောင်းတယ်။ သူ့တို့ မြို့မှာက တစ်မြို့လုံးနီးပါးက အစိုးရဝန်ထမ်းတွေများတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် နေပြည်တော်လိုမျိုးပေါ့။ အဲဒီတော့ သူ့အဖေကော သူအမေပါ မတူညီတဲ့ ဌာနက အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်တာကလည်း သိပ်မဆန်းပါဘူး။ တရက် သူ့အဖေ ယနေ့ခေတ်မှာ ကွန်ပျုတာလို့ ခေါ်မယ့် စက်အကြီးကြီးယူလာပြီးတော့ လျှောက်ကလိတာ သူမြင်တော့ ဘာများလုပ်နေတာလဲဆိုတာ စပ်စုရင်း နောက်ဆုံးတော့ ဂိမ်းဆော့နေတာမြင်တော့မှ ကွန်ပျုတာတွေကို စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဆိုပြီး စဖွင့်ရင်း သူ့ဘဝအကြောင်းကိုပြောပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ တပ်အပ်မတ်ကျ မဟုတ်ပေမယ့် ကွန်ပျုတာကို စတင်ယူလာတာကလည်း ကိုယ့်အဖေဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ တချို့တချို့သော သူရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ၊ အတွေးတွေဟာ တရံတခါ တိုက်ဆိုင်တာရှိသလို ကွဲပြားတာလည်းရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သဘောကျတာတွေက အစောပိုင်း အင်တာနက်ယဉ်ကျေးမှုမှာ ဖိနပ်ကအစ လေယာဉ်အဆုံး ပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြတာတွေ ၊ ဆဲကြဆိုကြရန်ဖြစ်ကြတာတွေ၊ အင်တာနက်ခေတ်ဦးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ identity နဲ့မဟုတ်ပဲ သက်သက်စီဖြစ်ကြတဲ့ အချိန်တွေဟာ လွတ်လပ်မှုရှိသလို တယောက်ကိုတယောက် မသိပေမယ့် စိတ်ပါလက်ပါ ကူညီကြတဲ့ကာလတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ တက္ကသိုလ်တက်ဖြစ်ခဲ့ပုံ ၊ သူအသေကြွေတဲ့ အစ်မကြီးတစ်ယောက် ရည်းစားရှိမှန်းသိရက်နဲ့ Hangout လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကနေ စပြီး ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း တိုင်းပြည်အတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုပြီး စစ်တပ်ထဲဝင်ပေမယ့် အဆင်မပြေခဲ့ပုံနဲ့ နောက်ဆုံး တပ်ကနေထွက်ပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အစိုးရရဲ့ Intelligence Agency မှာ စလုပ်ဖြစ်ပုံတွေပါပါတယ်။ အစောပိုင်း System Engineer အနေနဲ့လုပ်ရင်းမှ Distributed Data တွေကို compute လုပ်နိုင်အောင် Server တွေ System တွေဆောက်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း NSA နဲ့ပတ်သတ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေဖတ်ရပေမယ့် အရမ်းကြီး နည်းပညာမဆန်လို့ အပြင်ကလူတွေဖတ်ရင်လည်း နားမလည်စရာတော့မရှိပါဘူး။
အဲဒီအပိုင်းတွေမှာ သူစပြီး အစိုးရရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းကို သံသယစဖြစ်လာပုံနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေရဲ့ လုံခြုံရေး အပိုင်းတွေရဲ့ နေစဉ်ဘဝမှာ လှုပ်ခတ်နိုင်မှုကို သတိထားမိလာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာ နောက်တစ်ချက်ထူးခြားတာက အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ အစိုးရနဲ့ Private Coporation တွေရဲ့ နီးစပ်နီးကပ်မှုတွေ၊ ခြစားမှုတွေပါ။ ဒါက ဒီနယ်ပါယ်မှမဟုတ်ပါဘူး ၊ Black Water လို လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေက အစ Bad Blood ထဲမှာပါတဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Coporation တွေအထိ အကုန်နီးပါးက ဒီပုံစံဆန်ဆန် သွားနေတာပါ။ အရင်ကတည်းက NSA ဟာ လူတွေရဲ့ သတင်းအချက်အလက်ကို ဖမ်းယူရာမှာ အတော်ကို အစွမ်းထက်မှန်းသိပေမယ့် စနိုးဒန် ရဲဲ့ ကိုယ်တွေ့ကို ဖတ်ကြည့်မှပဲ အတော်ကို ကြောက်ဖို့ကောင်းမှန်းသိလာရပါတယ်။ ဥပမာ ကမ္ဘာရဲ့တဖက်ခြမ်းမှာရှိ သာမန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ webcam ကိုလှမ်းကြည့်နိုင်စွမ်းရှိပြီး မျိုးစုံထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရ ဖြစ်နိုင်မှန်းသိပင်သော်ညား တကယ်ကြီး လုပ်ကြတယ်လို့ ကြားတဲ့ အခါ လန့်စရာကြီးပါပဲ။
Bad Blood (Book Review)
Bad Blood ဆိုတဲ့စာအုပ် ငှားဖတ်နေတာ ဒီနေ့မှပဲ ပြီးတော့တယ်။ စာအုပ်ကတော့ ၂၀၁၈ လောက်တည်းက ဘီလ်ဂိတ် စာညွန်းရေးထားတာကို တွေ့ဖြစ်ပြီး ဖတ်ချင်နေတာပါ။ အကြောင်းကတော့ Theranos ဆိုတဲ့ ကုမ္ဗဏီနဲ့သူ့ founder…
ဒါအပြင် ကျွန်တော်တို့ ရင်းနှီးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကိုယ်တိုင်က အစိုးရရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ တင်ဒါခေါ်တဲ့အခါ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေပါတယ်။ ဥပမာ အစိုးရ စောင့်ကြည့်စနစ်တည်ဆောက်မယ့်အခါ Dell နဲ့ Amazon တို့က hardware အရ support လုပ်တာမျိုး Google က internal Search Engine ရေးပေးတာမျိုးတွေ့တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လောက်ထိ အာမခံပေးထားမလဲဆိုတာ ခပ်လန့်လန့်ပါပဲ။
"ငါ့ကိုတော့မလုပ်လောက်ပါဘူးတို့ ငါမှာတော့ သူတို့စောင့်ကြည့်ရမယ့် သတင်းအချက်အလက်မရှိဘူး"လို့ ဖြေသိမ့်လို့ရပေမယ့် ဒီလောကမှာ ဒီ power မျိုးဟာ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမရှိသင့်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်။ တဖက်က ပြန်ကြည့်ရင်လည်း ဒီဘက်နှစ်ပိုင်းတွေမှာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေသာမက အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပါ data farming တွေ ကောင်းကောင်းကြီးလုပ်နေသည့် သကာလ ဒီဟာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျင့်ဝတ်တွေ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဟာ တိတိပပ မထွက်သေးတာဟာ ချိုးဖောက်လို့ရတယ်လို့ ပြောနေသလိုပါပဲ။ ဒါအပြင် ဘာမှမဟုတ်လောက်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ ဘာကြိုက်တက်လဲ ဘယ်လို တုံပြန်သလဲဆိုတဲ့ data တွေတောင် သန်းပေါင်းများစွာ map လုပ်လို့ရတဲ့ အခါ Brexit လိုမျိုးဖြစ်တာတွေ၊ Donald Trump ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်တာတွေမျိုး စသဖြင့် manipulate လုပ်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ် တွေက Cambridge Analytica လိုကိစ္စမျိုးမှာတွေ လက်တွေ့တွေ့နိုင်ပါပြီ။ အဲဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး Netflix က The Great Hack ဆိုတဲ့ Documentary ရှိပါတယ်။ အတော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။
တဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ အသိုင်းအဝိုင်းမှာလည်း သူကိုကြိုက်တဲ့သူရှိသလို အတွင်းသတင်းကို ဖြန့်ချတာဖြစ်လို့ သစ္စာဖောက်လို့ယုံကြည်သူလည်းရှိပါတယ်။ အဲဒီဟာနဲ့ပတ်သတ်လို့ မငြင်းချင်ပါဘူး။ သို့သော် နှစ်ဖက်လုံးက အချက်လက်ကို ဖတ်ရှုပြီးမှ ကောက်ချက်ချတာဟာ ပိုပြီးမျှတယ်လို့ ထင်သလို၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီစာအုပ်မှာ သူ့အကုန်ဖွင့်ဟဝန်ခံထားတယ်လို့ မယုံကြည်ပါဘူး။ သိုဝှက်ထားတာတွေလည်းရှိရင်ရှိနိုင်မှာပဲလေ။ သို့သော် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ ညွန်ပြသွားတဲ့အချက်တွေက တချို့အရာတွေက ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိနဲ့ နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာ ရင်ကိုရင်ဆိုင်ရမယ့် အင်တာနက်နဲ့ လူမှုဘဝ မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေ၊ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
Don’t underestimate the IT guy. Edward Snowden – who in 2013 told the world about the United States’s illegal mass-surveillance of its citizens’ communications – was notacomputer genius exfiltrating secrets from the bowels of the National Security Agency (NSA) and CIA through brilliant technical s…
New Statesman AmericaSteven Poole